Tsy fanarahan-dalàna izao… | NewsMada
Tsy fanarahan-dalàna izao…
Hirahirain’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ny hoe ny fanarahan-dalàna ihany no hampisy fitoniana. Hatraiza ny fahamarinan’izany, raha ny afitsoky ny mpitondra tao anatin’izay efa-taona mahery? Fanamby nampievotrevotra, ohatra, ny hoe fanjakana tan-dalàna.
Nanomboka tamin’ny fanolorana praiminisitra ny tsy fanarahan-dalàna, nahatonga tsy fitoniana sy tsy fahamarinan-toerana politika. Tsaroan’ny rehetra ny fifandroritan-dava ny amin’ny fampiharana ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana. Nitohy izay tsy fanarahan-dalàna izay.
Nampikorontana ambony ambany ny tontolo politika koa ny fanosihosena ny And. 72 amin’ny lalàmpanorenana amin’ny tsy fahazoan’ny depiote miova vondrona politika, ankoatra izay nahavoafidy azy. Maika hahazo maro anisa ka ninia tsy nanaja lalàna fotsiny izao.
Teo koa ny tsy fametrahana amin’ny toerany ny anjara toeran’ny lehiben’ny mpanohitra eo anivon’ny Antenimierampirenena, narirarira lava tamin’ny filalaovana lalàna izany. Anisan’ny nahatonga ny fanoherana nikiry hidina an-dalambe izay? Tsy nisy toerana tsinona teny an-dapa.
Nitohy tamin’ny tsy fananganana ny Fitsarana avo (HCJ), araka ny voalazan’ny And. 167 amin’ny lalàmpanorenana ny tsy fanarahan-dalàna, tonga amin’ny fitorian’ny depiote ho an’ny fanovana 73 ny fanonganana ny filohan’ny Repoblika. Ny fanarahan-dalàna ihany no hampisy fitoniana?
Matoa izany tonga ny tsy filaminana sy ny tsy fitoniana politika, misy ny tsy fanarahan-dalàna. Tsy ny mpitondra ve no tena fositra sy fototr’izao savoritaka sy olana politika izao? Efa ho lava ny tsy fanarahan-dalàna, ka midona amin’ny ampiantany na rindrina… Misy ny farany.
Saingy mihevi-tena ho lehibe tsy meloka ny mpitondra. Nefa noho ny afitsoka ihany izao, fa tsy inona… Mahatsiaro ho voatohintohina sy tsy afa-manoatra manoloana izao toe-draharaha sarotra sy manahirana izao? Miseho manome lesona hanamarinan-tena… hiampangana ny hafa.
Ny fanarahan-dalàna ihany tokoa no hampisy fitoniana? Mila averina amin’ny laoniny ny zava-drehetra… Tena hisy àry ve ny fanajan-dalàna hamahana izao krizy politika izao?